भिडियो रिपोर्टः दुवै मिर्गौला फेल भएका बिरामीको नेपालमै पहिलो पटक मुटुको जटिल शल्यक्रिया - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ विशेष रिपोर्ट ∕ भिडियो रिपोर्टः दुवै मिर्गौला फेल भएका बिरामीको नेपालमै पहिलो पटक मुटुको जटिल शल्यक्रिया
हेल्थ आवाज आईतबार, २०७९ वैशाख १८ गते, १५:३५ मा प्रकाशित
काठमाडौं—सिरहा लहानका मोहम्मद सवीर वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा कतारमा थिए । एक वर्षअघि मात्रै उनलाई विसन्चो हुन थाल्यो । त्यसपछि कतारमै उनले स्वास्थ्य परीक्षण गराए । डाक्टरले नेपालमै गएर उपचार गर्ने सल्लाह दिए ।
डाक्टरको सल्लाहपछि उनी नेपाल फर्किए । वैदेशिक रोजगारीबाटै परिवारको सम्पूर्ण लालनपालन गर्दै आएका उनीसँग आर्थिक अभाव उत्तिकै थियो । नेपाल फर्केपछि शहीद गंगालाल हृदय रोग केन्द्रमा स्वास्थ्य परीक्षण गराए ।सवीरको मिर्गौलामा समस्या देखियो ।
मिर्गौलामा समस्या देखिएपछि उनलाई भक्तपुरस्थित शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा पठाइयो । त्यही बेला इमर्जेन्सी शल्यक्रिया गरेर एउटा किड्नी फालियो । उनलाई डाइलाइसिसमा राखियो । र, मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न सुझाव दिइयो ।
त्यसपछि उनी मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि आवश्यक खर्चसहित चाँजोपाँजो मिलाउन घर गए । पछिल्लो एक वर्ष उनले जीवन र मृत्युको आशा र त्रासमै बिताए । मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि सबै तयारी सकेपछि गत पुसमा नयाँ जीवनको आशा लिएर ३६ वर्षीय सवीर छोरा मोहम्मद सफराज राय र श्रीमतीसहित काठमाडौं आए ।
भनिन्छ, जहाँ गहिरो त्यही पहिरो । ठ्याक्कै सवीरको जीवनमा पनि यस्तै नियति दोहोरियो । मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि केन्द्रमा थप चेकजाँचहरु गर्दा उनको मुटु असामान्य देखियो । मुटुमा समस्या देखिएपछि मिर्गौला प्रत्यारोपण टिमले थप चेकजाँचका लागि केन्द्रका कार्डियो भास्कुलर सर्जन डा. सन्जीतकुमार शाहको विभागमा पठाइदियो ।
डा. शाहले उनको थप चेकजाँच गराए । ‘मुटुले राम्रोसँग काम नगरेको पाइएपछि हामीले थप जाँच पडताल अगाडि बढायौं,’ केन्द्रका कार्डियो भास्कुलर सर्जन डा. सन्जीत भन्छन्, ‘त्यसपछि हामीले एन्जीओग्राम ग¥यौं ।’ एन्जीओग्राम गर्दा उनको मुटुका तीन वटा नसामध्ये दुई वटा पूर्ण रुपमा बन्द भएको र अर्कोमा पनि बोसोहरु जम्मा भएको पाइयो । डा. सन्जीतकाअनुसार तेस्रो नसाबाट अलिअलि रगत सर्कुलेसन भइरहेको तर कतिबेला रोकिन्छ भन्ने अवस्थामा थियो । डा. सन्जीतकाअनुसार सबीरलाई ‘डबल भेस्सल डिजिज वीथ क्रोनिक किड्नी’को समस्या देखियो ।
‘बुवाको मुटुको एउटा नसा पहिले नै ब्लकेज रहेछ,’ उनको छोरा सरफराज भन्छन्, ‘तर, बुवाले त्यो कुरा नभनेरै लुकाउनु भएको रहेछ ।’ पछि जाँच गरेपछि बल्ल थाहा भयो । मिर्गौलाले काम नै नगरेर एक थोपा पनि पिसाब नआउने सवीरको जिन्दगीमा अर्को ठूलो स्वास्थ्य संकट थपियो । ‘यथाशीघ्र मुटुको शल्यक्रिया नगरी नहुने अवस्था थियो,’ डा. सन्जीत सुनाउँछन्, ‘अरु स्वास्थ्य समस्या पनि भएकाले शल्यक्रिया के गर्ने भनेर सोधे ।’ त्यसपछि सवीरले केही दिन समय मागे । मुटुका लागि आवश्यक औषधिहरु दिएर पठाइयो ।
दुई महिनापछि गत चैतमा उनी मुटुको शल्यक्रिया गर्ने योजना बनाएर केन्द्रमा आए । सवीरलाई थप काउन्सिलिङ गरियो । जटिलताका बारेमा बिरामी र उनका परिवारलाई समेत जानकारी दिइयो । किड्नी र मुटुको टिमसँगै राखेर कसरी उपचार गर्ने भन्ने विषयमा गहन छलफल भयो । ‘ज्यान बचाउनका लागि मुटुको शल्यक्रिया अनिवार्य हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं,’ डा. सन्जीतले भने, ‘मुटुको शल्यक्रिया गरेमा डाइलाइसिस गरेर पनि बचाउन सकिन्थ्यो । मुटुको शल्यक्रिया नगर्दा बिरामीको जीवन नै रिस्कमा हुन्थ्यो । त्यही कारण हामी शल्यक्रिया गर्ने निष्कर्षमा पुग्यौं ।’
त्यही कारण चिकित्सकहरुको टिमले सवीरको मुटुको शल्यक्रिया गर्ने योजना अगाडि बढायो । १० चैतबाट उनलाई अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार सुरु गरियो । सवीरका अन्य स्वास्थ्य सूचकहरु असामान्य भएकाले शल्यक्रिया अगाडि ती सामान्य बनाउन आवश्यक थियो ।
रगत खराब हुने, रगत जम्ने, हेमोग्लोबिनको मात्रा निकै कमजस्ता समस्या उनमा थिए । विस्तारै उपचार अगाडि बढाइयो । ४ मात्र रहेको हेमोग्लोबिनलगायतलाई व्यवस्थापन गर्न विस्तारमा परीक्षण गरेर एक महिना काम गरे । ८ बैशाखमा कार्डियो भास्कुलर सर्जन डा. शाह, गंगालाल हृद्धय रोग केन्द्रका डा. विश्व पोखरेल, डा. अजय खड्का, केन्द्रकै एनेस्थेसिया टिमको ब्याकअपमा लागि मनमोहन कार्डियोथोरासिक सेन्टर डा. प्रिस्का बास्तोलालाई बोलाइयो । प्रफ्युनिष्ट निलम पण्डित, सहयोग उमेश खान, नर्सहरु कामना बोगटी र ज्योति कोजुसहितको टिममा झण्डै २ घण्टा समय लगाएर सवीरको शल्यक्रिया गरियो । मिर्गौला फेल भएका बिरामीको मुटु शल्यक्रिया गरिएको सम्भवतः नेपालमा यो पहिलो हो ।
मुटुको शल्यक्रियापछि अहिले सवीर सामान्य अवस्थामा फर्कदैछन् । ‘अहिले मलाई राम्रो हुँदै गएको छ,’ गत बिहीबार सवीरले हेल्थआवाजसँग भने, ‘नेपालमै यस्तो राम्रो केन्द्र रहेछ । यस्तो शल्यक्रिया हुन्छ भनेर थाहै थिएन । कमसेकम बाहिर एउटा बोर्ड भएपनि त राख्नुप¥यो ।’ उनी आफूलाई नयाँ जीवन दिने चिकित्सकहरुको टिमप्रति निकै अनुग्रहित देखिए । मुटुको शल्यक्रियापछि उनलाई डाइलाइसिस गरिदैं आएको छ । केही समयमै अब सबीर मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न सकिने गरी सन्चो हुनेछन् र उनलाई मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिनेछ । आर्थिक रुपमा निकै विपन्न भएकाले अस्पतालले औषधी, प्रयोगशाला जाँच, शल्यक्रियालगायतका सबै कुरामा उनलाई छुट दिएको छ ।